Axelssons နှင့် Aby | Hultsfred သို့သွားပါ
နေအိမ် » 🍽 စားသောက်ပါ။ » 🚜 ခြံဆိုင်များ » Axelssons နှင့် Aby
ခြံဆိုင်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်လိုသူများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်လေ့လာရေးခရီးဖြစ်သည်။ စတော်ဘယ်ရီရာသီအတွင်း, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စတော်ဘယ်ရီသွားကောက်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုင်၌လယ်ယာ၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သောအာလူးနှင့်စတော်ဘယ်ရီအမျိုးမျိုးရှိသည်။ စတိုးဆိုင်သည်လူသိများသောမူရင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအသေးစားပေးသွင်းသူများထံမှထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်သည်။ ပျားရည်၊ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ ယို၊ မမာလာဒါ၊ ဒိန်ခဲနှင့်သိုးနှင့်အခြားများမှဥများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးသည့်ထုတ်ကုန်များကို ဦး စားပေးသည်။ နွေရာသီတွင်နေ့လည်စာစားချိန်၌လယ်ယာကဖေးတစ်ခုဖွင့်သည်။
တနင်္လာနေ့: 10-18အင်္ဂါနေ့: 10-18ဗုဒ္ဓဟူးနေ့: 10-18ကြာသပတေးနေ့ - ၆-၂၂သောကြာနေ့: 10-18စနေနေ့: 10-15တနင်္ဂနွေ: 11-16
မာလီလာ၊ 570 82 မာလီလာ, ဆွီဒင်
4.7 ထဲက 5.0
Google တွင် 399 ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ
Underbar plats med när producerat mat, bra kvalitet . Finns även möjligheter att plocka frukt själv .. ett mysigt nöje med egna plockade jordgubbar mm Rekommenderar verkligen alla att åka dit ..
God tillgänglighet. Bra urval av potatis.
အရမ်းကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်း။ သူတို့ရောင်းသမျှ အရည်အသွေးကောင်းတယ်။
5/5 လွန်ခဲ့သော2လက
ကုန်ပစ္စည်းများရော ဝန်ထမ်းများပါ အလွန်ကောင်းမွန်သော နေရာဖြစ်သည်။ အရမ်းစားလို့ကောင်းပါတယ်။
အကောင်းဆုံးနေရာ။ လှေကားမရှိ အပြင်ဘက်တွင် ကားရပ်နိုင်သည်။ အိမ်သာရှိတယ်။ ကော်ဖီအိမ်တွင် ဖုတ်ပြီး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါရှိသော ဟင်းချိုများအတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါရှိသော ကောင်းမွန်သော အာလူး waffles များ။
2022-06-29T06:27:40+02:00ကော်ဖီဆိုင်, 🚜 ခြံဆိုင်များ|